Ady amin'ny kolikoly :: Nanolotra vahaolana ho an’ny Fitsarana ny HCDDED • AoRaha
Nandroso vahaolana maromaro hoentina misoroka ny kolikoly eny anivon’ny Fitsarana ny Filankevitra ambony ho an’ny fanjakana tan-dalàna, ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana (HCDDED). Torohan’io filankevitra io mantsy « ny fahapotehan’ny Fitsarana noho ny kolikoly eto amintsika amin’izao fotoana izao ».
Nandritra ny atrikasa notanterahin’ireo mpikambana eo anivon’ny HCDDED, teny Ampefiloha, omaly, no nanaingany ny minisiteran’ ny Fitsarana mba hanaparitaka ny taratasy fanentanana amin’ny fanajàna ny etika ara-maoraly hialana amin’ny kolikoly eo anivon’ireo rafi-pitsarana eto amintsika.
« Eo ihany koa ny fisakanana ny kiantranoantrano amin’ny fampidirana ny fianakaviana mpitsara ao anatina rafi-pitsarana iray. Zava-dehibe koa ny fanomezana vahana ny fanatanterahana ny Dina », hoy i Imbiky Anaclet, zokiolona ao amin’ny HCDDED, izay isan’ireo nitarika ny atrikasa nitondrana ny lohahevitra « Fanjakana tsara tantana ».
Efa manomboka mijery vahaolana amin’io kolikoly manimba endrika ny fianakaviamben’ny Fitsarana io ny minisitera, amin’izao fotoana izao. Isan’izany, ohatra, ny fidirana an-tsehatry ny Filankevitra ambonin’ ny mpitsara tamin’ny famindrana ny raharahana andramena niampangana mpandraharaha iray.
Fanenjehana mpitondra ambony
Fanambadian’ny mitovy fananahana :: Naboraky ny kardinaly Tsarahazana Désiré ny fandisoana ny hevitry ny Papa